Dhalinyarta Iyo Sadexda Suldaan Ayaa Badbaadisay Saylac Iyo Awdal By Omar Farah Abdilahi | Cadceed newssite
Dhalinyarta Iyo Sadexda Suldaan Ayaa Badbaadisay Saylac Iyo Awdal By Omar Farah Abdilahi
Maqaalkan waxaan uga dan leeyahay in aan ugu hiiliyo dhalinyarta mar walba u dagaalanta una dhimata dalkeena iyo dadkeena waa geesiyaal aan la shaacin.waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay wiilkii dhalinyarta ahaa Jimcaale. Waxa iyaguna amaan mudan odayaal dhaqameedka bedelay siyaasiyiinta macnaha daran ee awdal iyo selel ku abtirsada.
Awdal waxa usoo baxay sadex halyey oo ka turjuma dareenka dadka iyo dhalinyarta waa Samatar, Dhawal iyo Wabar. Waxaan ka damqaday dhiiga ubaxa Borama ee lagu daadiyey banaanka gurigooda. Waxaan u qaadan waayey damiir laawayaasha isku magacaaba siyaasiyiinta ee u adeega nidaamka Siilaanyo een waxba dhaamin tii Siyaad Bare. Kuwaas oo soo horkaca nidaamkaas oo lagu horlaayo caruurtooda.
Anu marna ma jecli in dad, gobol ama beel lagu dulmiyo qabiil. Mana jecli in aan amaanka iyo nabad kuwada noolaanshaha Somaliland la burburiyo. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in aanan dul qaadan dulmiga iyo tacadiga siyaasiyiinta Somaliland ee u arka in dadka xadaarada, dadnimada iyo sharafta badan ee reer awdal uu nidaamka Somaliland u arko doqmo aan waxba iska celin.
Waa in aan iska moosnaa dulmi kasto oo aan meel ugasoo wadajeesanaa. Maadaama aan leenahay imika odayaal geesiyiin ah oo ka talo iyo raganimo badan siyaasiyiinta hargeisa jooga. Kuwaasoo akhriya dareenka bulshada Borama ka dibna u turjuma nidaamka dulmiga ku dhisan ee Hargeisa.
Ma jirto mar aan ka rajo fiicanahay waayo waxaad moodaa in aan imika si u wada aragno siyaasad qalafsan ee Hargeisa lagaga dhaqmo. Laakiin waxaan u baahnahay in aan soo saarno siyaasiyiin brakega u qabta baabuurka bilaa biriiga ah ee usoo dhaqaaqa xaga Borama isagoon xishoonayn waxbana xeerinayn. Soomaliland farta waaweynbay wax ku fahantaa dagaal iyo qaylo hadaad kala hortagi waydo marka fawdo soo kacdo cidna ku ixtiraamimayso. Soomaali dagaal iyo inaanad cidna ka xishoon ood qaylo, diidmo iyo aad taaduun ku dhawaaqdo unbay wax ku fahmaan. Aaamusnaanta iyo xishoodka reer Borama waa laga fiican yahay. Iyadoon waxba ladulmayn waxaad xaq u leedahay cidna ha ka baryina eek u dagaalama. Siyaasiyiinta manta jooga yaan loo joojin. Laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay sadexda libaax ee difaaca danta awdal iyo Selel waa Suldaan Samatar, Suldaan Dhawal iyo Suldaan Wabar.
Waxaan maqaalkayga kusoo gunaanadayaa in sidaa ay sadexda Suldaan iskugu xidhan yihiin bulshada inteeda kalena iskugu xidhanto. Oo Wadajir iyo midnimo ayaa meel lagu gaadhaa waxna la iskaga difaacaa ee sidaa la iskugu xidhnaado. Jago weyn ayaa Awdal iyo Selel ka banaan oo ilaa hada sugaysa libaax ku fadhiista Jagadaasi waxay u baahnatahay nin siyaasi ah oo dadka si midnimo, geesinimoku jirto,
iyadoon lagu xadgudbayn gobolada kale ku hogaamiya bulshada una raadsha saamiga Somaliland kaga maqan, oo ka hor istaaga dulmiga isagoo adeegsanaya la taliyayaal adag sida sadexda suldaan ee qaaliga ah iyo dhalin yartaa naftooda u huraya danta dadweynaha.
DAAWO:-Madaxweynaha Jabuuti Ayaa Ka Qayb Galay Aas Qaran Oo Loo Sameeyay Saraakiil Ku Dhintay Shil Diyaarad September 19, 2017
DAAWO:-Isku Duwaha Wasaarada Caafimaadka Ee Gobolka Awdal Oo Maanta Tababar U Furay Xarumaha Dhalaanka Iyo Hooyada MCH Ee Gobolada Awdal Iyo Gabiley Oo Borama Ka Qabsoomay September 19, 2017